Odessa - intandokazi iholidi endaweni ogwini Black Sea. Lena akuyona nje ethandwa namaholide, kodwa futhi idolobha elihle, egcwele ezikhangayo eziningi ezithakazelisayo. Odessa - kuyinto umoya injabulo, induduzo, injabulo, amahlaya omuhle okuqhubekayo.
Kuhlala ekhatsi Odessa
Makalale Odessa -, ngaphezu kwakho konke, induduzo kanye nemfudumalo. Okunjalo isimo kudalwa hhayi kuphela sezulu eyingqayizivele kanye nemizwelo ekhethekile yezakhamuzi zendawo, kodwa futhi sibonga amahhotela eziningi ukhululekile, isivakashi izindlu futhi amakhaya iholide, elisedolobheni. Lapha ungakhetha yokuhlala ukuze ivumelane zonke ukunambitheka kanye nalapho kungafanele.
iziphakamiso Iningi nezezindlu livela isikhungo noma Primorsky esifundeni Odessa, njengoba lezi zindawo afaneleka kakhulu izinga nokungcebeleka. Kukho konke lokhu ezihlukahlukene, ungakwazi ukuthola amahhotela ezishibhile e-Odessa.
Ngesikhathi enkabeni yedolobha itholakala, ehhotela ethokomele. "Inkanyezi" Igama lakhe lesikhungo lithole kusukela eponymous yamabhayisikobho, lapho khona ekwakheni. Ihhotela "Zirka" (Odessa) - siyindlela isabelomali izindlu, ngoba ayinaye amagumbi abangenathuba amafasitela. Ziyakwazi eshibhe. Kodwa, naphezu kwakho konke lokhu, amakamelo wonke Izinsiza. Ngakho-ke, lokhu kusimo akuphazamisi ezingeni wenduduzo.
Kusukela ngo-2007, esikhundleni ebhayisikobho isakhiwo ehhotela itholakala. Futhi nenani lesikhathi esifanayo - lokhu ingenye yezindawo ethandwa kakhulu ukuze uhlale e-Odessa ngesikhathi abakhe ezweni CIS.
Zonke amakamelo air conditioning, i-TV, esiqandisini futhi eshaweni. Ejabulisa indawo ekahle. imizuzu engu-10 nje kuyinto mgwaqo emaphakathi Odessa - Deribasovskaya. Picturesque emaphakathi lolwandle futhi ngaphakathi ukuhamba ibanga.
Ihhotela Izibuyekezo ngempela uyababazeka. Izivakashi sokujabulisa intengo nemibandela enikeziwe. inkonzo Ihhotela futhi kwenza ehhotela onjalo owawuthandwa "Zirka." Odessa - emzini omkhulu futhi kuyabiza. Kodwa khona kwalezi amahhotela ikuvumela ukuba uphumule kuwo benethezekile futhi bengakhokhi kakhulu.
Ihhotela kuyinto entsha, emva ukuvuselela. Amanzi ashisayo ihlinzekwa egumbini ubusuku nemini, sonke amakamelo soundproofing kakhulu. Intengo kuhlanganisa ibhulakufesi. Ukufinyelela i-Inthanethi futhi yokuthopha. Imoto yakho zingabekwa omunye izikhala yokupaka eduze ehhotela. Futhi kumahhala futhi. Amakamelo zikhishwa anganqamuki ngakho njalo ebusa nokuhlanzeka. Yini enye okudingeka uphumule - induduzo umnotho.
Izibuyekezo ehhotela bathi lapha kungaba umqondo omuhle ukuchitha iholide noma ngempelasonto ngesikhathi intengo imali. Inhlanzeko nenduduzo - kwalezi zimo ezinhle eyayikuzo ukugcizelela izivakashi.
Ihhotela sise ul. Assumption 70
Omunye izinhlobo ukonga kakhulu ehostela yokuhlala kubhekwe. Odessa oluyohlala izivakashi zayo futhi lolu khetho. Ihostela "Inkanyezi" Itholakala enkabeni yedolobha, ezitaladini Tiraspol, 8. Kuyinto elula ukuba ezikhangayo leli dolobha: hamba ku Deribasovskaya 3 amakota, futhi kuze kube "Nezelani" - 3 tram sithule. Ngenxa evuthiwe ingqalasizinda yezokuthutha, ehostela izivakashi Ungahlala uma ufuna ukuyithola lolwandle, kuphi emzini. Kukhona inala izindawo ukupaka izimoto.
Ihhotela Star - ehostela nge izinga eliphezulu wenduduzo. Ihlanganisa 5 endlini enamakamelo phansi 2nd yokwakha 4-storey. Lesi sakhiwo kukodwa lesikhumbuzo yezakhiwo. Ngesikhathi sokuqala kukhona ayimi esitolo, yokudlela, salon. Ngo uhamba ibanga - ebhange futhi ezihlukahlukene izindawo zokudlela, amathilomu, Pharmacy, exchange. Amahhotela eshibhile futhi babe ingqalasizinda evuthiwe e-Odessa.
Ihostela izivakashi uyozizwa ekhaya kwelinye lamakamelo abantu 8 noma esihlalweni-2 umndeni-isitayela session yangasese. Amakamelo Uphahla lwangaphakathi eliphezulu (amamitha angaphezu kuka-4) ziyojabula izivakashi nge ebumsulweni nasebunyeni kanye freshness emva ukulungiswa yamuva lapha. izindonga abajonqile ukunikeza ukwahlukanisa okuhle.
Ukuze ukuhlala ukhululekile - emibhedeni kanokusho omatilasi Bamathambo springless. Njalo isivakashi at ngesheke ekhishwe elinemishwe kanye amathawula.
Zonke amakamelo-moya. Ikhishi ine yonke imishini ezidingekayo: cooker, kuhhavini, imethrikhi, efrijini, iketela, ikhofi umenzi. Ngaphezu kwalokho, izivakashi uphiwa itiye khulula nekhofi. I uyisicaba 3 zangasese lapho kukhona izindlu zangasese 4, shower 2 1 kubhavu. Nge amanzi ashisayo akunankinga: ukugeleza kwalo ihlelwe ubusuku nemini, futhi uma kwenzeka iphutha elingalindelekile ehostela has ithangi Reserve.
Izivakashi can ngasiphi isikhathi, ukusetshenziswa khulula we hairdryer, yensimbi kanye ayina ebhodi, futhi imali - umshini wokuwasha. umthwalo wakho kungenziwa kwesokunxele in ngabanye isitoreji emakamelweni. Izibuyekezo eziningi bathi lokhu ehostela engcono. Odessa ungajabulisa izivakashi kolwandle efudumele hhayi kuphela, kodwa futhi ethokomele letibita kancane. Ngokwe Izibuyekezo - lokhu ingenye amahostela engcono e-Odessa. Kodwa ukuthola lapha akulula kangako. Ngomusa ukucacisa ukutholakala.
Nganoma yingasiphi ehostela inikeza khulula high-speed-Wi-Fi-Inthanethi. Futhi ingxoxo Igumbi izivakashi zijabulela umbono omunye iziteshi 600 kwi-plasma TV, ukudlala imidlalo on aduduze noma ideskithophu. Kunetafula Billiard okhokhelwayo.
abasebenzi Ihostela bekulungele ukusiza izivakashi emzini: bona ukweluleka sendlela futhi yini enye engcono eya ezikhangayo esithile, lapho ungakwazi adle ephansi ukusiza ukuqasha itekisi.
Amahhotela eshibhile Odessa kungaba hhayi kuphela ukhululekile, kodwa futhi eyingqayizivele. Omunye indawo enjalo uzobe kuchaziwe ngezansi.
Ihostela "ngetshe", isenkabeni yedolobha, emgwaqeni. Shchepkin, 21, nguye kuqala i eco-ehostela. izivakashi yakhe banethuba omkhulu ukuhlola idolobha - izinto, kuhlanganise Deribasovskaya Street, kukhona ngaphakathi ukuhamba ibanga.
Eco-Ihostela "ngetshe" ithobela ifilosofi indzawo lenemphilo kanye ephephile sokuzilibazisa. Lokhu kuhambelana izinombolo yokubhalisa: ngezinto zemvelo elingaphakathi, uphayini ifenisha futhi lime, ukotini zokulala nelineni, omatilasi kanye zemvelo. A egeza futhi ehlanza abasebenzi ehostela zisebenzisa kuphela izindlela okubolayo ukuthi ungawoni imvelo.
Ngezinye isevisi yakho - ayimi reception, khulula Wi-Fi, ephephile, ngocingo. Ikhishi ifakwe isitofu, isiqandisi, imethrikhi, izitsha.
Izivakashi bangahlala egumbini moya:
Imininingwane egumbini embhedeni-10 (imibhede embhedeni, yokugezela yangasese abiwa);
Imininingwane egumbini embhedeni-6 (imibhede embhedeni, yokugezela yangasese abiwa);
Okujwayelekile 2 enezihlalo (nge-embhedeni 2 ne-TV).
Izivakashi kungenzeka umxhwele ukuphumula ukhululekile endaweni Isizalo ahlanzekile. Lokhu kunikeza amandla ezengeziwe.
Ihhotela sinendawo omkhulu - kule mlando city centre emgwaqeni. Zintathu, 21. Ukuhlala lapha, kuyoba izivakashi edude Opera House womuzi, edumile Potemkin Izitebhisi futhi Primorskiy Boulevard, Deribasovskaya Street ne amathilomu eziningi, zokudlela kanye nezitolo. Ungahamba ebhishi kwepaki kubo. T. G. Shevchenko, kanye esiteshini sesitimela.
It inikeza izivakashi zalo ehostela:
ezivamile egumbini embhedeni-8;
Imininingwane egumbini embhedeni-6;
Imininingwane Igumbi 4 embhedeni-;
2 igumbi elijwayelekile (nge tikhungo tangasese).
Amahhotela eshibhile e Odessa, efudumele futhi basamukela. Ngakho kungani akhokhe imali ethé xaxa?
Lesi sakhiwo kwehhotela "uMzila" (Odessa), isenkabeni yedolobha (emgwaqeni. Isimo, Isakhiwo 34), ngokwalo, ingenye ezikhangayo esemqoka yedolobha. Lesi sakhiwo esihle statues nenhle (lesikhumbuzo bokwakha Baroque) yayakhiwe ekuqa- namakhulu eminyaka 19-20th futhi ekuqaleni yakhelwe njengoba ehhotela kanye shopping centre.
Namhlanje isakhiwo esiyingqayizivele, okuyinto, ngaphezu amahhotela, kukhona eziningi ezitolo elise egcekeni ngaphansi kophahla ingilazi.
Ihhotela - 130 amakamelo-moya. Ihlanganisa zihlalo kanye kuvulandi yangasese, babe zangasese ensuite elineshawa futhi okugeza. imibhede Extra azitholakali.
Reception usebenza ubusuku nemini. Izivakashi ungavakashela bar noma yokudlela, esebenza cuisine Georgian.
Iminyango ububanzi amahhotela evulekile e-Odessa izivakashi ngayo yonke amathuba. Into kuphela ukuthi kudingeka kwenziwe - pre-ncwadi indawo ilanga.